ब्लग – Page2– Pahilo Page
कुवेतमा NRNA को रेडीमेड भाषण र फेसबुके पत्रकार
केही दिन पहीला कुवेतमा सम्पन्न एक कार्यक्रम समाहोरमा विशेष अतिथिको आषण ग्रहण गर्दै एनआरएनए एनसिसि कुवेतले लामो समयपछि समाजमा फेरि आफ्नो उपस्थिति जनायो । भूमिगत जस्तै भएको एनसिसिले यसरी आन्तरिक रुपमै संस्थालाई जागरुक गराउदै नेतृत्वको हेरफेर गरी एक्कासी समाजमा सार्बजनिक हुदा कार्यक्रममै धेरैले कानेखुशी गरे । जतिलाई चासो ...
‘हाउ साथी ! यो त ज्याद्रै भो यार ! सरकारको विरोध गरेकोमा तपाइँले के पाउनुहुन्छ, र यतिविधि जोस्सिनु हुन्छ ? फेरि आफ्नै पृष्ठभूमिका मान्छेहरुकै शक्तिशाली सरकारको यतिसाह्रो खेदो खनेर के उपलब्धि हुन्छ ?’ माथि उल्लिखित ‘झोंक’ सरकार समर्थित एकजना परम मित्रले फेसबुक म्यासेन्जरमा प्रश्नको रुपमा मलाई टकार्नु भयो । म गहिरो सा...
काठमाडौँ । नेपालीमा एउटा उखान छ जो अगुवा उही बाटो ‘ भने जस्तै कामको नाममा वरको सिन्को पर नसार्ने, अरुले गरेको कामको जश आफूले लिने र अरुकेही पनि होइनन् । म मात्रै हो भन्ने प्रवृत्तिलाई हामीले संस्थागतरुमपा नै पराजित गरिदिएका छौ । राष्ट्रिय फोटोपत्रकार समुह (एनएफपीजे) को नाममा विभिन्न जिल्लामा समुहको शाखा खोल्ने ...
मगर समुदायमा एउटा मिथक छ– महजरीका गुरु कुटुमबुढा कुटुमबुढी हुन् । धेरै पहिले ती जोडीले मगर सभ्यताको एउटा चरणमा महजरीको खोज गरे । महजरी हिमालय रेन्जको बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म १५ सयदेखि ३ हजार मिटरको उचाईका ओसिलो लेकाली खोँचमा पाइने बुटी हो । ती जोडीले महजरीको जरालाई ओखतीको रुपमा मात्र उपयोग गरेनन् बरु पहिलोपटक यसको प्...
मेरो घडी र सूर्य थापाको बिहे
मेरो घडी उस्तै गतिमा दौडिरहेछ टिक... टिक... टिक....। र, घडीसँगै समय र समयसँगै घडीको एउटै ताल। गतिशील समयको यो भागमा उभिएर हिजोलाई फर्केर हेर्दा मेरो नाडीमा बाँधिएको घडी र सूर्यको बिहे मानसपटलमा जीवन्त बनेर अडिएका छन्। सम्झनाको एउटा भागमा छन्– कान्तिपुर दैनिकका गंगा बीसी र युद्धपछिको घोराही बजारको भग्नावशेष। युद्धपछि...
दिन, साता, महिना हुँदै वर्षै बितेछ । खै ? यो अवधिमा घडीको सुईले कति फन्को मार्यो कुन्नि ? घडीको सुईले जति फन्को मारे पनि अहँ आएन फेसबुकमा एउटै पनि म्यासेज । आएन मोबाइलमा एउटै पनि एसएमएस, सुनिएन कुनै आवाज । देखिएन कुनै छायाँछवि ! पुष्पकमल दाहाल अर्थात प्रचण्ड कतिपटक यो बाटोघाटो वा आकाशमा ओहोरदोहोर गरे होलान् ? खै, त्...
माओवादी “जनसत्ता”मा समलिङ्गी मुद्दाको यस्तो रोचक प्रसङ्गको खुलासा
रोल्पाको दक्षिणी भेगमै खट्दा बुढागाउँ एउटा नमूना थियो र आज पनि छ । त्यहाँका कार्यकर्ताको समर्पण भाव र जनताको हार्दिकतापूर्ण सहयोगले नै दुश्मनको दशवर्षे युद्धको मध्यकालीन दमनलाई चिर्न सकियो । राम्रो भित्र नराम्रोको अंश हुनु र नराम्रोको थुप्रोभित्र राम्रोको अंश हुनु पनि प्रकृतिको द्वन्द्वात्मक नियम नै रहेछ । नराम्रो राम्...
एसिड प्रहार प्रकरण : किन सम्झिइन् रेखाले अचानक रुद्रप्रिया ? आक्रोशमा लेखिन् यस्तो
रेखा थापा एसिड प्रहार भएको १२ दिनपछि हिजो सम्झना दास सम्झनामा मात्र सीमित भएर सदाका लागि बिदा भइन् । बहिनी सुस्मिता अस्पतालमा उपचारत छिन् । चितवनमा बसन्ती परियारमाथि एसिड प्रहार भएको घटना आज बाहिरियो । उनको शरीरको २५ प्रतिशत भाग जलेको छ । यस्तो खबरले एकसाथ ममा अथाह आक्रोश र आँशु पैदा गर्छ । सम्झनालाई हार्दिक श्रद्धा...
यस्ता रहेछन् प्रहरीका ५ संकट र मनोबल खस्नुका १० कारण
नेपाल प्रहरी यति बेला सर्वत्र चर्चामा छ । खास गरी प्रशंसाभन्दा पनि आलोचना निकै धेरै भइरहेको छ । कुनै समयमा विश्वमै अब्बलदर्जाको संगठन भएको चर्चामा रहेको नेपाल प्रहरीमा आइपरेका संकट र एकाएक ओइलाउनुको कारणबारे खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । केही उच्च प्रहरी अधिकारीसँग गरेको छलफल र बहसबाट हामीले नेपाल प्रहरीले वर्तमानअवस्थामा...
रणनीतिलाई कार्यनीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी सोचाइबारे
का. रामसिंहले भन्नु भए झैँ पहिले भएको बैठकमा हामीबीचमा पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्न बहस र छलफल गर्दै जाने सहमति भएको हो । हाम्रो पार्टीले उहाँहरूसँग मात्र होइन, देशका अन्य वामपक्षीय वा सार्वजनिक रूपले पनि त्यस प्रकारको बहस र छलफलका लागि ढोका खुला राखेको कुरा स्पष्ट छ । यस सन्दर्भमा यो कुरामा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक...